Maxay tahay Sababta Cali yare Cali looga hor istaagay in uu ka duulo Garoonka Aadan Cadde? – Bulsho News
Maxay tahay Sababta Cali yare Cali looga hor istaagay in...
Muqdisho-KNN-Guddoomiye ku xigeenka dhanka Amniga ee Gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa maanta laga celiyey Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Cali Yare iyo ciidan uu watay oo ku wajahnaa Magaalada Guriceel ayaa loo diiday inuu Garoonka ka dhoofo.
Lama sheegin sababta loo celiyay Cali Yare iyo ilaaladiisa. Waxaa la aamisan yahay inuu u socday magaalada Guriceel si uu u sameeyo olole la xiriira kursiga HOPP#147.
Shalay ayay marikii is hortaagg lagu sameeyey guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo loo diiday inuu ka baxo garoonka Aadan Cadde, xilli uu ku sii jeeday Baraawe.